‘बंगलादेश ऊर्जाको भोको देश हो, नेपाल स्रोत मुलुक बन्न सक्छ’ – सत्य तथ्य र निष्पक्ष्य समाचारको लागि
२० मंसिर, काठमाडौं । नेपालका लागि बंगलादेशका नवनियुक्त राजदूत सलाहुद्दिन नोमन चौधरीले बिहीबारदेखि औपचारिकरुपमा कार्यभार सम्हालेका छन् । उनले बिहीबार राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसमक्ष ओहादाको प्रमाणपत्र बुझाएका छन् ।
नवनियुक्त राजदूत चौधरीसँग दक्षिण एसियाली मुलुकहरुमा काम गरेको लामो अनुभव छ । यस अगाडि उनले नयाँ दिल्लीस्थित बंगलादेश उच्च आयोग र पाकिस्तानमा पनि काम गरेका छन् ।
नेपालमा नयाँ राजदूतको कार्यभार सम्हालेपछि राजदूत चौधरीसँग दुई देशको सम्बन्धका विभिन्न विषयमा अनलाइनखबरकर्मी कमलदेव भट्टराई र रविन्द्र घिमिरेले गरेको कुराकानी :
नयाँ राजदुतका रुपमा भर्खरै कार्यभार सम्हाल्नुभएको छ, नेपाल–बंगलादेश सम्बन्धलाई विस्तार गर्ने तपाईको भिजन के छ ?
नेपाल र बंगलादेशबीच निकै पुरानो र राम्रो मित्रता छ । जब सन् १९७१ मा बंगलादेश स्वतन्त्र भयो, त्यसलाई मान्यता दिने पहिलो मुलुक नेपाल थियो । त्यसैबेलादेखि हामीबीच एउटा वृहतर, राम्रो, मित्रवत र भाइचारापूर्ण सम्बन्ध रहँदै आएको छ ।
नेपालका लागि राजदूतका रुपमा मेरो पहिलो प्राथमिकता दुई देशबीचको यो सुमधुर सम्बन्धलाई निरन्तरता दिनु र अझ सुदृढ बनाउनु हुनेछ । हामी अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय माझ नजिक रहेर काम गरिरहेका छौं । त्यसैले, हामी यो सम्बन्धलाई अझ मजबुद बनाउन चाहन्छौं । यति नजिकको सम्बन्ध भएर पनि दुई देशबीचको ‘व्यापार सम्बन्ध’मा त्यो प्रतिविम्बित हुन सकेको छैन । जति सम्भावना छ, त्यसअनुसार हुन सकेको छैन । म ब्यापार तथा लगानी क्षेत्रका सम्भावना र अवसरलाई अझ विस्तार गर्ने प्रयास गर्नेछु ।
अर्को मेरो प्राथमिकता नेपाल बंगलादेशका जनता–जनताबीचको सम्बन्धलाई अझ विस्तार गर्ने हो । दुवै देशमा पर्यटनको प्रचुर सम्भावना छ । नेपालमा मात्रै हैन, बंगलादेश पनि पर्यटकीय सम्भावना छ । बंगलादेशसँग क्षेत्रीय मात्रै हैन, विश्वकै ठूलो सामुद्रिक किनारा पनि छ । त्यसैले नेपालीहरुलाई त्यहाँ घुम्न जाने अवसर छ । मेरा आधारभूत प्राथमिकताहरु यिनै हुनेछन् ।
नेपाल र बंगलादेशबीच ऊर्जा क्षेत्रमा सहकार्यको ठूलो सम्भावना छ । तर, ठोस प्रगति भएको छैन । अब सहकार्य कसरी अगाडि बढ्छ ?
यो हाम्रा लागि निकै महत्वपूर्ण विषय हो । बंगलादेश उर्जाको भोको मुलुक हो । हामी तीब्र विकासको चरणमा छौं । त्यसैले आउने दिनमा हामीलाई ठूलो मात्रामा उर्जा चाहिन्छ । बंगलादेशको विद्युत उत्पादन क्षमता करिब २० हजार मेगावाट मात्रै छ । तर, हामीलाई छिट्टै अरु १० हजार मेगावाट बिजुली चाहिने अवस्था छ । त्यसैले, नेपाल हाम्रा लागि विद्युतको स्रोत मुलुक हुन सक्छ । नेपालसँग जलविद्युत उत्पादनको ठूलो सम्भावना छ ।
हामी यसकारण खुसी छौं कि नेपालका ऊर्जामन्त्रीज्यु नै जलविद्युत बारेको एमोयुका लागि बंगलादेश पुग्नुभयो । हामीले यो एमओयुलाई अझै अघि बढाउनुपर्छ र समृद्ध बनाउनुपर्छ । त्यसका लागि ऊर्जा सचिवस्तरीय बैठक हुनुपर्ने थियो, तर कोभिड–१९ को महामारीका कारण प्रभावित भयो ।
ढाकाबाट नेपाल आउनुअघि म ऊर्जा मन्त्रालयका वरिष्ठ अधिकारीलाई भेट्न पुगेको थिएँ । बंगलादेशका सरकारी अधिकारीहरु यो एमओयुबारे थप छलफल गर्न नेपाल आउन निकै उत्साहित हुनुहुन्छ, त्यसैले बंगलादेशका तर्फबाट यो मुद्दामा निकै चासो र ठूलो प्राथमिकता छ ।
मैले हिजो नेपालका सम्माननीय राष्ट्रपतिसँग पनि कुरा गरेँ, हामीले विश्व समुदायसँग क्लिन इनर्जीका लागि प्रतिवद्धता पनि गरेका छौं । नेपाल जलविद्युतको स्रोत मुलुक हो । यदि हामीले नेपालको जलविद्युत बंगलादेशमा प्रयोग गर्‍यौं भने हामीले ‘क्लिन इनर्जी’बारे गरेको प्रतिवद्धता पूरा गर्न पनि सहयोग मिल्नेछ ।
नेपाल र बंगलादेश दुबै जलवायु परिवर्तनको दृष्ट्रिकोणले निकै जोखिमपूर्ण अवस्थामा छौं । हिजो मैले ओहोदाको प्रमाणपत्र बुझाएपछिको भेटमा नेपालका सम्माननीय राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले पनि बंगलादेशको यस्तो अवस्थाका बारेमा आफू जानकार रहेको बताउनुभयो ।
नेपालको जलविद्युत प्रयोग गर्‍यौं भने हामीले अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय माझ गरेका प्रतिवद्धता पूरा गर्न सहयोग गर्ने छ भने हामीलाई जलवायु परिवर्तनको मुद्दामा हामी उत्तरदायी मुलुक बन्न सक्दा त्यसबाट आत्मसन्तुष्टि मिल्नेछ । अहिले पनि हामीले जवाफदेही भएर कार्बनमुक्त विकासलाई प्रवर्द्धन गरिरहेका छौं । त्यसैले नेपालसँगको ऊर्जा सहकार्यले हामीलाई दुई किसिमको सशक्त फाइदा दिनेछ । हाम्रो विद्युतको आवश्यकता पूरा गर्न र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमा गरेका प्रतिवद्धता पूरा गर्न पनि सहयोग मिल्नेछ ।
नेपाल र बंगलादेशको ऊर्जा सहकार्यलाई व्यवहारमा उतार्नका लागि भारतको पनि भूमिका महत्वपूर्ण हुन्छ । किनकि, नेपालको बिजुली बंगलादेश पुग्न भारतकै बाटो प्रयोग गर्नुपर्छ । यसलाई कसरी समाधान गर्ने ?
यदि म गलत छैन भने नेपालको बिजुली बंगलादेश पुर्‍याउन एउटा त्रिपक्षीय संयन्त्र हुनेछ । नेपाल, भारत र बंगादेशबीच विद्युत प्रसारणका लागि यो आवश्यक पर्नेछ । तर, पहिला त कसैले जलविद्युतमा लगानी गर्नुपर्‍यो, जलविद्युत उत्पादन हुुनुपर्‍यो । त्यसपछि मात्रै भारत हुँदै नेपालको बिजुली बंगलादेश पर्‍याउने विषय आउँछ । त्यसका लागि नेपाल भारत र बंगलादेशबीच त्रिपक्षीय सम्झौता हुनुपर्छ । हामीसँग बंगलादेश, भारत र नेपालको ‘बीबीआईएन’ संयन्त्र छ । त्यसमा पनि यसबारे तीन देशबीच छलफल हुन सक्छ ।
तपाईंले बीबीआईएनको प्रशंग कोट्याउनुभयो । अहिले सार्क ‘कोमा’मा पुगेको छ । क्षेत्रीय सहकार्यलाई ब्युँताउन नेपाल र बंगलादेशले कहाँबाट भूमिका खेल्न सक्लान् ?
‘बीबीआईएन’को मुद्दामा लामो समयदेखि छलफल भइरहेको । हामी आशावादी छौं कि भारत, बंगलादेश र नेपालबीच ‘मोटर भेहिकल एग्रिमेन्ट’ भने जतिसक्दो छिटो सञ्चालनमा आउनेछ ।
हामी यो सम्झौता गर्न निकै उत्सुक छौं, किनकि यसपछि हाम्रो यात्रु र कार्गो सीधै भारत हुँदै नेपाल आउन सक्छन् । नेपालको यात्रु र कार्गो पनि त्यसैगरी बंगलादेश पुग्न सक्छन् । म आशावादी छु कि अब महामारीका कारण रोकिएको संवाद फेरि केही महिनापछि सुरु हुनेछ र छिट्टै अन्तिम रुप दिन सकिनेछ ।
नेपाल र बंगलादेश दुबै ‘सार्क लाई अघि बढाउन चाहन्छन् । तर, चार वर्षदेखि सार्क निष्क्रिय छ, यो अवस्थामा नेपाल र बंगलादेशले सार्कलाई ब्युताउँन के भूमिका खेल्न सक्लान् ?
मलाई लाग्छ कि सबैभन्दा पहिले त हामी सार्कले दिने के–के अवसरहरु दिन्छ भन्नेबारे प्रष्ट हुनुपर्छ । सार्क दक्षिण एसियाली क्षेत्रमा ब्यापारको सम्भावना बढाउन महत्वपूर्ण छ । सार्कमार्फत यसलाई अघि बढाउन राजनीतिक प्रतिवद्धताको खाँचो छ ।
नेपाल र बंगलादेशले लामो समयदेखि सहुलियतपूर्ण ब्यापार सम्झौताका लागि छलफल गरिरहेका छन् । तर, अहिलेसम्म यो मुद्दा टुंगिन सकेन । किन यसमा प्रगति हुन सकिरहेको छैन ?
यो प्रक्रियामा राम्रो प्रगति भएको छ । म यहाँ आउनुअघि वाणिज्य सचिवस्तरको वार्तामा म सहभागी हुन पाएको थिएँ । म सौभाग्यले त्यहाँ थिएँ । यो नेपाल र बंगलादेशबीच ब्यापार सम्झौताका लागि भएको छैठौं बैठक थियो । अब एदकमै थोरै मुद्दाहरु छन्, जो दुवै देशले छलफलबाट टुंग्याउन बाँकी छन् । हामी आशावादी छौं कि यो छिट्टै टुंगिन्छ । किनभने, दुबै देशले आ–आफ्नो आफ्ना वस्तुको सूची दिएका छन् । हामीले हाम्रो सूची दिएका छौं, नेपालले आफ्नो सूची दिएको छ । हामी छलफलको प्रक्रियामा छौं । हामी एक अर्काको सूची परीक्षण गर्दैछौं । यदि त्यो प्रक्रिया छिट्टै सकियो भने सम्झौतामा चाँडै हस्ताक्षर हुनेमा धेरै आशावादी छु ।
यदि यो सम्झौतामा हस्ताक्षर भयो भने दुबै देशबीचको ब्यापार अहिलेको भन्दा निकै बढ्नेछ । अहिले दुई देशबीचको ब्यापारको आकार सानो छ । अहिले दुई देशबीच वार्षिक करिब ५० मिलियन डलरको मात्रै ब्यापार छ । यो हाम्रो क्षमतासँग तुलना गर्दा आयात–निर्यातको परिमाण निकै सानो हो । त्यसैले यो सम्झौता पछि नेपाल बंगलादेशको ब्यापार बढ्नेछ ।
नेपाल र बंगलादेशबीचको ब्यापार अभिवृद्धि र सहजीकरण तथा पर्यटन विस्तारका लागि रेल्वे र कनेक्टिभिटी महत्वपूर्ण छ । बंगलादेश रेल र हवाइ उडानबाट नेपालसँग जोड्ने कस्तो योजना बनाउँदैछ ?
हो, सडक मात्रै हैन, हामीले नेपालसँग जोडिन रेल्वे पनि माध्यम हुनसक्छ भनेर पहिचान गरेका छौं । हाम्रो सामान बिडल–राधिकापुर हुँदै भारतको रेल्वेलाइन भएर नेपाल आउनसक्छ । योबारेमा पनि हामी बीआईएन संयन्त्रमा छलफल गरिरहेका छौं । यदि यो टुंगियो भने निकै प्रभावकारी परिवर्तन हुनेछ । किनभने त्यसपछि नेपाली वस्तु मोगंला बन्दरगाहबाट आयात हुन सक्छ । यो पोर्ट पहिल्यै देखि प्रचलनमा थियो, हालसालै यसको क्षमता बढाइएको छ । त्यहाँबाट नेपाल आउने सामना नेपाल ल्याउन पनि यो रेल्वे कनेक्टिभिटीले मद्दत गर्नेछ ।
एयर कनेक्टिभिटीको कुरा गर्दा बंगलादेशको सइदपुर र नेपालको भद्रपुर तथा बिराटनगरबीच हवाई उडान गर्नेबारे छलफल गरिरहेका छौं । यसले नेपालको पूर्वी भेग र बंगलादेशको उत्तरी क्षेत्रलाई जोड्ने छ । एयर कनेक्टिभिटीबारे पनि हामी नेपालसँग छिट्टै बैठक गर्दैछौं । नेपाल र बंगलादेशको हवाई सेवा सम्झौताको मिति सकिएको छ । त्यसको नवीकरणका लागि पनि बैठक हुनेछ । आशा गरौं कि महामारीको अवस्था समान्य हुनेछ, हामी यसलाई टुंग्याउनेछौं ।
कक्सस बजारसँग पनि नेपालबाट हवाई उडान गर्न बंगलादेशको चासो देखाएको छ । कक्सस बजारमा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल छ । कक्सस बजारमा नेपाली पर्यटक जान सक्ने सम्भावना छ । अहिले हिमालय एयरलाइन्सले चित्ता गाउँमा उडान गर्ने अनुमति पाएको छ ।
नेपालबाट बंगलादेशमा धागो, अदुवा लगायतका नेपाली उत्पादन निकासीको राम्रो सम्भावना छ । तर, निर्यातकर्ताहरुको गुनासो छ कि नेपाली उत्पादनलाई बंगलादेशले विभिन्न कारण देखाएर अवरोध गर्ने गरेको छ । किन ?
मैले पनि यसबारेमा सुनेको छु । यो नेपालको मात्रै विषय हैन । त्यहाँ केही अवरोधहरु हुन सक्छन् । तपाईंले यसो भएको, उसो भएको छ भन्न सक्नुहुन्छ । तर, यो नेपालका लागि मात्र लक्षित हैन, सबै मुलुककका लागि हो । यस्तो अरु देशका लागि पनि भएको हुन सक्छ । अरु देशको उत्पादन त्यहाँ पुगिरहेका छन् । मलाई थाहा छैन, कि किन त्यहाँ नेपाली उत्पादनले प्रतिस्पर्धा गर्न सकिरहेका छैनन् ।
हामी अवरोधको गुनासाबारे ‘ज्वाइन्ट कस्टम ग्रुप’को बैठकमा नियमित छलफल गरिरहेका छौं । हामीले एक–एक गर्दै छलफलमार्फत यस्ता सबै सवाललाई समाधान गर्दै लागेका छौं । केही सवालहरु त यसअघि नै समाधन भएका छन् ।
म स्पष्ट गर्छु कि यस्तो नीति नेपाली उत्पादनको विरुद्ध हैन । सबै देशका आफ्ना आन्तरिक उत्पादन हुन्छन् । आन्तरिक उत्पादनलाई बढावा र संरक्षण दिन सबैजसो देशले यस्तो नीति लिएका हुन्छन् ।
नेपालले बंगलादेशबाट मल खरिद गर्न चाहेको छ, प्रक्रिया कहाँ पुग्यो ?
नेपालले बंगलादेशबाट मल किन्ने सम्बन्धमा एक सम्झौता आवश्यक पर्छ । हामीले सो सम्झौताको विषयवस्तुलाई अन्तिम रुप दिएर नेपाल सरकारलाई दिएका छौं । नेपाल सरकारले यसलाई अन्तिम रुप दिएपछि ढाकामा रहनुभएका नेपाली राजदुत र बंगलादेशका सम्बन्धित मन्त्रालयका वीचमा सम्झौता हुनासाथ मल नेपाल आउन शुरु हुन्छ । सम्झौता हुनासाथ मल नेपाल ल्याउन कुनै समस्या छैन ।
तस्वीरहरु : शंकर गिरी/अनलाइनखबर
Tags: ‘बंगलादेश ऊर्जाको भोको देश हो ऊर्जाको स्रोत मुलुक नेपाल बन्न सक्छ’ नेपाल स्रोत मुलुक बन्न सक्छ’
Next सोचेजस्तो नभयपनी बिराटनगरको फोहोर दैनिक उठेको छ ।
2 thoughts on “‘बंगलादेश ऊर्जाको भोको देश हो, नेपाल स्रोत मुलुक बन्न सक्छ’”
Fastidious answers in return of this question with real arguments and describing the whole thing about that. Marti Maxy Ed
I intended to put you the very little note to be able to give many thanks the moment again over the wonderful pointers you have documented above. It has been shockingly generous of you to grant without restraint what numerous people could have supplied as an e-book to end up making some profit on their own, even more so seeing that you might well have done it if you considered necessary. The good tips likewise acted to be the good way to be aware that other individuals have the same passion the same as my personal own to see more and more with respect to this problem. I believe there are numerous more enjoyable opportunities ahead for many who scan through your site. Maryrose Mick Waddell